FIFANDONANA TANY TSARATANANA : Telo lahy maty voatifitra, roa hafa azo sambo-belona
Manjaka izay tsy izy ny tsy fandriam-pahalemana ao anatin’ny Distrikan’i Tsaratanàna. 14 juillet 2017
Mivaivay ny halatr’omby sy ny fanafihana mahery vaika. Tao anatin’ny roa andro nifanesy, ny faran’ny herinandro lasa teo iny dia trangana fanafihana miisa telo no niseho tamina Kaominina telo samy hafa mandrafitra ny Distrika. Ain’olona telo no
niara-nafoy tao anatin’izany raha nisy roa lahy tamin’ireo olon-dratsy kosa no voasambotra.
Anisany lasibatra tamin’izany ny tao anatin’ny an-tanànan’i Tsararivotra. Telo lahy nirongo famaky sy antsy lava no nandravarava ny tanàna, ka naka omby 42 isa tamina valan’omby efatra tao an-toerana. Nanao izay danin’ny kibony tanteraka ry zalahy satria tsy nisy tsy sahy nanohitra ny olona noho ny vono lolo nataon’izy ireo tamin’ny alalan’ireo fitaovam-piadiana noentiny.
Vao mangiran-dratsy no fantatra fa nisehoan’io ary tsy afaka nampandre ny mpitandro filaminana ny fokonolona raha tsy efa nazava ny andro. Rehefa nahare ny zava-nisy ny Zandary dia raikitra avy hatranyny fanarahan-dia niarahana tamin’ny vatan-dehilahy teo an-tanàna. Tsy lasa lavitra dia nifanehatra ny roa tonta. Teo amin’ny toerana hoe Andohan’Andongoza no nisy ny fifampitifirana ka nahalavo ny roa lahy tamin’ireo dahalo, raha tafaporitsaka kosa ny raikalahy namany.
Ny androtr’io ihany, omby iray monja no namoizana lehilahy iray ny ainy. Tao Anosikely, eo an-tampon-tanànan’i Tsaratanàna indray no nisehoan’io. Omby iray nifatotra teo an-tokotany no nisy nangalatra an-tsokosoko. Nampandre ny Zandary ny tompon’omby izay tonga dia nanao ny fikarohana. Sarona teny an-dalana ilay dahalo nitsoaka ka rehefa tsy nanaiky nilefitra dia niharan’ny tifitra variraraka ka maty tsy tra-drano.
Araka ny vaovao voaray avy any an-toerana dia anisany manome vahana ireo mpanao ratsy tahaka izao ny faharatsian’ny lalana izay anisany manamora ny fitondrana ireo omby halatra mitsoaka. Mitebiteby andro aman’alina ny mponina noho ny fandrobana sesilany ataon’ireo malaso. Ankoatra ireo fanafihana roa ireo dia anisany lasibatra tamin’izay fanafihan-jiolahy izay ihany koa ny Fokontany Befanoro mbola eo an-tampon-tanànan’i Tsaratanàna, ny fiandohan’ny herinandro teo. Tamin’ny andro mbola mazava be izao no nanani-bohitra ireo malaso ary naka omby roa.
Taorian’ny fifanomezan-tanana teo amin’ny Zandary sy ny fokonolona dia tratra ny roa tamin’ireo mpanafika. Manoloana ny trangana tsy fandriam-pahalemana maimaivay any an-toerana no hanaovan’ireo mponina antso avo hatrany mba hisian’ny fandraisan’andraikitra.
Namoahana “Filazana Fikarohana” i Marco Randrianisa FIANTSOANA “ACTE ISOLÉS” (900) 2 mars 2021 Voaantso teny amin’ny biraon’ny Polisy tetsy Tsaralalàna indray CLEMENCE RAHARINIRINA (472) 5 mars 2021 Tsy hiara-dalana amin-dRavalomanana intsony ? FANAMBARAN’NY ANTOKO MFM (188) 2 mars 2021 Mikononkonona fanakorontanana ireo vehivavy RMDM ? HETSIKY NY VEHIVAVY 8 MARSA ANY DIEGO (97) 2 mars 2021 Jiolahy naman’i Del kely miisa fito voasambotra KIDNAPPING TAO AMBAKIRENY (96) 2 mars 2021 Voasoroka ny korontana nokasain’ ny RMDM hatao ANALAKELY - AMBOHIJATOVO (84) 2 mars 2021